आक्रोशित हुँदै सुरेन्द्र केसि र रेखा थापाले गरे खुलासा, यसरी हो देश बिग्रेको (हेर्नुहोस भिडियो)
प्रकाशित मिति : July 18, 2019
ताप्लेजुङमा जन्मिएका डा. सुरेन्द्र केसी करिब तीन दशकदेखि प्राध्यापनमा सक्रिय छन्। राजनीतिक विश्लेषकका रुपमा पनि चिनिएका उनका झण्डै दुई दर्जन पुस्तक, ६ सयभन्दा बढी लेख रचना प्रकाशित छन्। अमेरिकन लाइब्रेरीबाट पब्लिक स्पिकिङमा ग्राजुएट गरेका डा. केसी खरो विचारका लागि प्रख्यात छन्।
रेखा थापा (जन्म विसं २०३९ भाद्र ५) नेपाली चलचित्र क्षेत्रकि एक चर्चित अभिनेत्री र तथा र्निमात्री हुन् । सन् २००१ बाट उनले छबी राज ओझाको चलचित्र हिरोबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन् । हालसम्म उनले २०० वटा भन्दा बढी नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरेकी छिन् ।
सन् २०१० र २०११ मा उनले उत्कृष्ट अभिनेत्रीको सिजी डिजिटल फिल्म पुरस्कार पाएकी थिइन् र सन् २०११ मा उत्कृष्ट अभिनेत्रीको नेफ्टा फिल्म पुरस्कार जितेकी थिइन् ।दर्जनौ सुपरहिट चलचित्र “काली” र “हिम्मतवाली” पछि २०७० चैत-२६ मा चलचित्र “रामप्यारी” लिएर आएकि थिइन् ।
उनै राजनितिक बिष्लेशक डा.सुरेन्द्र केसि र रेखा थापा सुनौलो नेपालको युट्युव च्यानलले लिएको अन्तरबार्तामा खरो रुपमा उत्रिएका छन । नेपालमा हुने गरेका कार्य, नेपालका जनताले पाईरहेका दुख, जनताको काधमा भएको ऋण लगायत बिबिध पक्षको बारेमा औल्याएका छन । पहिलो पोस्ट र सुनौलो नेपालको सहयोगमा ।
हेरौ बिबिध पक्षमा सुनौलो नेपाल संग भएको कुराकानी :